Matanho mashanu Ekugadzira Iyo Inokunda Yemukati Yekushambadzira Strategy | Martech Zone
5 Matanho Ekugadzira Iyo Inokunda Yemukati Yekushambadzira Strategy
Chitatu, Kukadzi 2, 2022 Chitatu, Kukadzi 2, 2022 Mohsin ali
Kushambadzira kwemukati ndiyo inokurumidza kukurumidza uye inoshanda nzira yekutengesa bhizinesi rako, asi kugadzira zano rekuhwina kunogona kuve kwakaoma. Vazhinji vatengesi vezvemukati vari kunetsekana nehurongwa hwavo nekuti havana nzira yakajeka yekuigadzira. Vari kutambisa nguva nemaitiro asingashande pachinzvimbo chekutarisa mazano anoshanda.
Gwaro iri rinotsanangura matanho mashanu aunoda kuti ugadzire yako yekuhwina yemukati yekushambadzira nzira kuti iwe ugone kukura bhizinesi rako online.
Nhanho neNhanho Gaidhi yeKugadzira Inoshanda Yemukati Yekushambadzira Strategy Yemhando Yako
Nhanho 1: Isa Chinangwa Chako uye Zvinangwa Zvako
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kujekesa chinangwa chako uye kunyora pasi zvinangwa zvako.
Izvi zvichabatsira kutungamira kwete chete zano iri asiwo mamwe ese maitiro aunozogadzira mune ramangwana.
Funga nezvazvo nenzira iyi, nyanzvi kubva full service integrated marketing agencies bvuma kuti kuseta zvibodzwa ndiyo inonyanya kukosha nhanho yekutanga mune yako yemukati yekushambadzira zano.
Iwe haugone kusarudza nzira yekugadzira inobata zvemukati kana iwe usingazive zvauri kuyedza kuwana.
Zvinangwa zvako zvakasiyana nechirevo chemishoni sezvo ivo vachitarisa pane chaiyo zviito uye mhedzisiro, sekuwedzera kubatanidzwa kwevatengi kana kutyaira yakawanda traffic kune yako webhusaiti.
Zvinangwa Zvipi Zvaunofanira Kuva nazvo?
Chinangwa chako chinogona kunge chiri chekuwedzera traffic yakazara kuwebhusaiti yako, kutyaira vashanyi vakawanda kubva kumainjini ekutsvaga, kana kushandura akawanda anotungamira kuva vatengi.
Kana kuti iwe ungangoda kutarisa pane chaiwo zviito sekuwedzera huwandu hwevanyoreri kana kuita kuti vanhu vagovane zvirimo pasocial media.
Zano rakanaka rinosanganisira kwete mishoni chete asiwo zvinangwa zvakanangana, zvinoyerika, zvinogoneka uye zvinoenderana nebhizinesi rako.
Semuyenzaniso, kana ukamisa mishoni yekuve mutambi wekutanga muindasitiri yako mukati memakore mashanu saka izvi zvinogona kugadzira kudzvanyirira kukuru pauri uye kune wese munhu mukambani yako.
Chinangwa ichi chakakura zvekuti hazvigoneki kuzadzisa.
Saka panzvimbo pacho ungangoda kuseta zvibodzwa zvidiki zvegore rekutanga, sekupeta kaviri nhamba yako yevatengi mugore kana kusvika madhora miriyoni mumari.
Danho 2: Nzwisisa Vateereri Vako uye Kwavari
Iwe haugone kugadzira nzira yekushambadzira inoshanda kana iwe usinganzwisise wauri kuyedza kusvika uye nei vachizove nehanya nezvauchataura.
Kunzwisisa vateereri vako hakusi kungoziva kuti vangani vanhu varimo uye kuti maprofiles avo ehuwandu anotaridzika sei.
Iyi inzvimbo yakanaka yekutangira, asi iwe unofanirwawo kufunga nezve chimwe chinoita kuti nhengo yega yega yeboka rako ive yakasiyana.
Nzira yakanaka yekuita izvi ndeyekutsvagisa matambudziko avanosangana nawo zuva nezuva uye mibvunzo yavari kuedza kupindura.
Mibvunzo ipi yauri kubvunzwa neboka rako?
Ndeapi matambudziko auri kuvagadzirisira?
Ndeupi rudzi rwezvinyorwa zvavanoona zvichibatsira uye ndeupi ruzivo rungava kutambisa nguva yavo?
Ungagadzira sei zvemukati izvo zvisingangope mhinduro dzavanenge vachitsvaga chete asiwo zvinovapa chimwe chinhu chekuwedzera, sechidimbu cheruzivo rwakakosha kana zano rinobatsira?
Nhanho 3: Tora Zvakanakisa kubva kuChikwata Chako
Nekunzwisisa kukuru kwevateereri vako uye zvinangwa zvako zvakanyatsojeka, inguva yekuwana mhinduro kubva kune wese ari musangano rako ane hunyanzvi huchakubatsira kubudirira.
Kwete chete inofanirwa kunge ichisanganisira mamwe madhipatimendi sekushambadzira kana hukama neveruzhinji asiwo rutsigiro rwevatengi uye kutengesa.
Vanhu vese ava vanogona kuwana ruzivo rwaunoda.
Vanhu vanotengesa vanowana kubva kune vatengi kuti matambudziko avo makuru uye zvinovanetsa ndezvipi.
Vashandi vekutsigira vatengi vanogona kukuudza kuti ndeapi maficha anobvunzwa nevatengi kazhinji.
Funga izvi sechirongwa chekurangana - unganidza mazano ese, muono nemazano pamwechete wotora nguva yekumaongorora nemazvo usati waita sarudzo dzekupedzisira.
Izvo zvinoita senge zano rakakura pakutanga rinogona kunge risina kunaka kana ukatora nguva yekuzvifunga.
Danho 4: Ziva Vateereri Vako uye Masvikire Avari
Kana iwe uchinge wanzwisisa kuti vateereri vako ndivanaani, kana ingangoita boka rinotarirwa saka chaunofanirwa kuita kutsvaga mashandisiro avanoda kushandisa ruzivo pamhepo - kunyanya, matorero avanoda kugamuchira zvemukati kubva kubhizinesi rako.
Mabhizinesi mazhinji ane akawanda mawebhu traffic uye mafeni enhau dzemagariro kupfuura zvavanogona kufambirana nazvo nekuti vari kugadzira mhando yezvinyorwa kune wese wese.
Izvi zvinongoita kuti zvive nyore kune vanokwikwidza kuti vasvike kune vanhu vanofarira zvigadzirwa zvavo kana masevhisi kwete ako.
Saka chii chaunofanira kuita panzvimbo?
Tsvaga kuti ndedzipi nzira dzemagariro avo vateereri vako vari kunyanya kushandisa uye kwavanowanikwa. Ziva avo vari vateveri vevakwikwidzi vako, vateveri uye vatengi.
Gadzira hurongwa hwekuita navo. Kana paine chidimbu chemukati chinonyanya kugamuchirwa, saka tarisa kugadzira zvimwe zvemhando iyoyo.
Kana paine chimwe chidzidzo kana dingindira raunoziva kuti vateereri vako vaunofarira, saka tarisa kugadzira zvimwe zvirimo zvakatenderedza iwo madingindira.
Nhanho 5: Gadzira Yakanaka Yemukati
Rimwe rematambudziko makuru anotarisana nechero muridzi webhizinesi kuziva kugadzira zvinobatika uye zvinobatsira zvemukati pasina kushandisa nguva yakawandisa kana mari.
Nezvishandiso zvese zvekushambadzira zvinopihwa, unogona kuyedzerwa kumhanyisa mukati uye kuyedza imwe neimwe yadzo.
Dambudziko nemaitiro aya nderekuti haashande.
Iwe unopedzisira wapedza nguva yakawandisa uchiedza kubata zvese chiitiko chauri kugadzira asi ishoma nguva yekunyatso kugadzira izvo zvinozobatsira bhizinesi rako kukura.
Gadzira karenda yemukati inorangarira chero chimwe chiitiko chekushambadzira chauri kuita, senge email danidziro kana social media chiitiko.
Usatombozvinetse nekugadzira zvirimo kunze kwekunge chiri chikamu chechirongwa - wobva wanamatira kuchirongwa uye usabva pachiri kunyangwe chingave kuyedza sei kuita chimwe chinhu panzvimbo.
Pane zvikonzero zvakawanda nei kugadzira chirongwa chemukati chebhizinesi rako chinogona kubatsira zvakanyanya.
Kwete chete zvinokupa mufananidzo wakajeka wezvaunofanira kunge uchiita uye nzira yekuzadzisa zvinangwa zvako, asiwo kuti inguva yakawanda sei uye kushanda nesimba kunobatanidzwa mukuzvizadzisa.
Zvakakosha kuyeuka kuti maitiro haapere - kana chinangwa chimwe chasvikwa, inguva yekutanga kutarisa chinotevera.
Uye kana uchinge waona chinangwa ichocho, tora nguva yekutarisa kumberi uye kuronga kuti uchaita sei kuti bhizinesi rako rirambe richikura kana chinangwa ichocho chaitwa.
Tags: Vateererivateereri vemukatiContent Marketingcontent marketing vateererizvemukati zvinangwa zvekushambadziracontent marketing strategyzvemukati zvekushambadzira timuzvemukati zanokugutsikana kukuruwekushambadzira agencykukunda zano
Mohsin chipangamazano uye mudzidzisi pamwoyo. Ave ari muindasitiri kwemakore gumi, achibatsira vanhu kuzadzisa zvinangwa zvavo kuburikidza nekushambadzira kwedhijitari. Haisi yekungowedzera traffic kana kushandura zvirinani - ndezvekuita shuwa kuti unokwanisa kutaura meseji yako zvinobudirira kuitira kuti vateereri vako vanzwisise zvaunoda kuti vaite!
Ndeapi Mabasa Anodiwa muDhijitari Yekushambadzira Dhijitari?